Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxa Duleedka Baydhabo Oo Sii Korortay. – Calamada.com
Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxa Duleedka Baydhabo Oo Sii Korortay.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya lagula beegsaday duleedka degmada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay.
Kolanyada qaraxa lala beegsaday ayaa la xaqiijiyay iney ka baxeen magaalada Baydhabo kuwaasi oo ku sii jeeday dhanka degmada Bardaale ee gobalka Baay.
Qaraxa waxa uu sigaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Awdiinle iyo degmada Bardaale oo ka wada tirsan gobalka Baay.
Idaacada Islaamiga Andalus ayaa baahisay in qaraxaasi gaari looga gubay askarta Xabashida Itoobiya islamarkaan sidoo kale ay jiraan tiro askar Itoobiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaasi.
Qaraxan ayaa imaanaya xilli barqo nimadii shalay qarax ka dhacay agagaarka deegaanka Deynuunaay ee duleedka Baydhabo lagu gubay gaari xamuul ah oo ay wateen maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka’waxaana qaraxaasi lagu dilay 8 askari oo maleeshiyaatka dowlada ah.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 01-06-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 01-06-1437 Hijri.